के तपाईलाई थकाइ मात्र लागिरहन्छ ? यी योगासनबाट मिल्छ लाभ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ के तपाईलाई थकाइ मात्र लागिरहन्छ ? यी योगासनबाट मिल्छ लाभ
हेल्थ आवाज शनिबार, २०७८ कात्तिक २७ गते, ०५:३६ मा प्रकाशित
दिनभरको दौडधुप र कामको चापले शरीरमा थकान महसुस हुनु सामान्य कुरा हो । तर, सधै थकान र कमजोरी महसुस हुने समस्या भएमा यसलाई रोगको लक्षण मानिन्छ । स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार खराब जीवनशैली जस्तै:- धुम्रपान, खराब खानपान, निन्द्रा वा व्यायामको कमी, मुटुरोग, मधुमेह वा थाइराइडजस्ता रोगले पनि मानिसमा थकान ल्याउन सक्छ । यही कारणले गर्दा समयमै थकानको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन आवश्यक छ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार थकानको समस्या कुनै अन्तर्निहित अवस्थाका कारणले हैन भने नियमित योगको साथै आफ्नो खानपानमा सुधार गर्नाले पनि यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । योग शारीरिक गतिविधि बढाउन र थकान हटाउनको लागि उत्तम तरिका हुन सक्छ।
धेरैजसो योग आसनहरूलाई विशेष उपकरणको आवश्यकता पर्दैन र सजिलै घरमै गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् जानौं ती योगासनहरूको बारेमा जसको नियमित अभ्यासले थकानको समस्यालाई हटाउन मद्दत गर्न सक्छ।
भुजंगासन योग वा कोबरा पोजको नियमित अभ्यासले ढाड र मेरुदण्डको दुखाइबाट छुटकारा पाउन मात्र मद्दत गर्दैन। यसले थकान हटाउनुको साथै शरीरमा ऊर्जा भर्ने काम गर्छ । भुजंगासनको नियमित अभ्यासले अन्य धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू निको पार्न पनि उपयोगी मानिन्छ।
भुजंगासन योग गर्नको लागि पहिला भुइमा सुत्नुहोस् र आफ्नो हत्केलाहरूको बलमा काँधको चौडाइबाट अलग राख्नुहोस्। आफ्नो शरीरको तल्लो भाग भुइँमा राखेर श्वास लिनुहोस् र भुइँबाट आफ्नो छाती उठाउनुहोस् र छत तिर हेर्नुहोस्। श्वास छोड्दा आफ्नो शरीरलाई भुइँमा ल्याउनुहोस्।
धनुरासन योगको नियमित अभ्यासलाई अक्सर थकानको समस्या हुनेहरूका लागि पनि राम्रो विकल्प मानिन्छ। हड्डी र मांसपेशीलाई स्वस्थ राख्नका साथै शरीरमा रक्तसञ्चार बढाउन पनि यो योग निकै लाभदायक हुन्छ ।
यो योग गर्नको लागि तपाईले पहिला आफ्नो पेटको सहाराले सुत्नु पर्छ र आफ्नो घुँडाले आफ्नो कम्मर तिर झुकाउनु पर्छ। अब आफ्नो हातले आफ्नो खुट्टा समात्नुहोस्। अब आफ्नो खुट्टा र हात सकेसम्म माथि उठाउनुहोस् र आफ्नो अनुहार माथि राख्नुहोस्। सकेसम्म लामो समयसम्म यस मुद्रामा रहन प्रयास गर्नुहोस्।
माउन्टेन पोज योग
शरीरको थकान र कमजोरी हटाउनका साथै शरीरमा नयाँ ऊर्जाको संचारलाई बढावा दिन ताडासन योग दैनिक अभ्यास गर्न सकिन्छ। ताडासन वा माउन्टेन पोजले शरीरका सबै मांसपेशीहरूलाई फैलाउछ।
यो योग आसन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला सीधा उठ्नुहोस्, आफ्नो हात सीधा राख्नुहोस्। गहिरो श्वास लिएर दुवै हातलाई टाउकोभन्दा माथि उठाउनुहोस् र औंलाहरू जोडेर तन्काउनुहोस्। शरीरको भार खुट्टाको औंलाहरूमा राख्नुहोस्। केहि सेकेन्डको लागि यो स्थितिमा रहनुहोस्।
१५ वर्षसम्म कैदी जेलमा, चिप्सको प्याकेटमा शुक्रकीट पठाएर जन्माए ४…
दन्त चिकित्सकले तपाईको दाँत हेरेरै जीवनशैली जान्न सक्छन्
भिडियो रिपोर्टः उच्च रक्तचाप के हो ? के उच्च रक्तचापको…